Izindaba - Uyini Umehluko Phakathi Kwe-Wet Foggers Vs Dry Foggers
Izindlela ezimbili ezivame kakhulu zokuchaza ama-fogger omiyane yi-Thermal kanye ne-ULV Cold foggers.Kodwa ngezikhathi ezithile, ungase uzwe abantu besebenzisa amagama afana nama-foggers omile namanzi.Ngakho-ke, sibhale lesi sihloko ukuze sikhanyise ngendaba yezinkungu ezimanzi nezomile.Sizochaza ukuthi ziyini, zisebenza kanjani, nokuthi uyini umehluko phakathi kwazo.
Umehluko Phakathi Kwe-Wet Foggers kanye Ne-Dry Fogger:-
Uma kukhulunywa ngenkungu eyomile noma emanzi ekhiqizwa ama-fogger ezinambuzane, umehluko omkhulu usayizi wamaconsi.
I-dry fogger ngokuvamile inamaconsi angu-10 kuya ku-15 microns ububanzi.Lokhu kungenxa yokuthi amaconsi mancane kangangokuthi enza inkungu ebonakala yomile.
Ngakolunye uhlangothi, inkungu enamaconsi angama-microns angu-20 kuya kwangu-30 ububanzi ibhekwa njengenkungu emanzi.Le nkungu ibonakala imanzi futhi ifana nenkungu kunenkungu.Wonke ama-fogger amaconsi awo angaphezu kwama-microns angu-30 ngokuvamile ayinkungu noma izifutho, hhayi ama-fogger.
I-Dry Foggers :-
Ngakho-ke, ngokusekelwe kule ncazelo, ama-fogger amanzi nawomile ayahluka ngokusekelwe enkunguni ayikhiphayo.
Ama-fogger amaningi ashisayo ama-foggers owomile ngenxa yokuthi inkungu yawo ngokuvamile iqukethe amaconsi angama-microns angu-10 ububanzi.Lawa ma-fogger alungile uma udinga ukusabalalisa inkungu endaweni enkulu impela.Lokhu kungenxa yokuthi izinhlayiya ezincane zizokwazi ukusakazeka kabanzi futhi zihambe ibanga elide ngenxa yamaza komoya nomoya.
Okubi kulokhu ukuthi inkungu ingase ingambozi kahle yonke indawo obufuna ukuyelapha.Lokhu kusho ukuthi kungase kube ngcono ukugxumeka inkungu indawo okungenani izikhathi ezimbili ukuze uthole ukutholakala okuphelele.
I-Wet Foggers :-
Ama-Fogger amaningi abandayo noma ama-ULV angahlakaza inkungu eyomile nemanzi.Imibhobho yabo ikuvumela ukuthi ulawule kokubili umthamo wesifutho nosayizi wamaconsi phakathi kwebanga lama-microns angu-5 kuya kwangu-50.Uma nje ugcina amaconsi emancane, uzothola inkungu eyomile (okuzosebenza kuyo izici ezishiwo ngaphambilini).
Uma ulungisa umshini ukuze ukhiqize i-fogger enamaconsi angama-microns angu-20 noma ngaphezulu, uzoba ne-fogger emanzi.Lawa maconsi amakhudlwana angcono ekusetshenzisweni okufana nokubulala amagciwane, ukulawula isikhunta, noma ukukhomba izindawo ezithile ngesibulala-zinambuzane.Lawa maconsi amakhudlwana asho ukuthi inkungu izomanzisa izindawo ezithile futhi izimboze kahle ngesixazululo esikhethiwe.
Noma ngabe usebenzisa luphi uhlobo lwama-fogger - omile, omanzi, abandayo, noma ashisayo kufanele uwahlole ukuze ubone ukuthi yimuphi usayizi wamaconsi ofaneleka kangcono izinhloso zakho zohlelo lokusebenza.Lokhu kungase futhi kwehluke ngokusekelwe
==>Izimo zezulu (izindawo ezinomoya kakhulu uma kuqhathaniswa nezindawo lapho umoya uyivelakancane),
==>Indawo yokwelapha (ngaphakathi noma ngaphandle)
==>Uketshezi olusetshenzisiwe (izixazululo ezisekelwe emanzini noma zikawoyela).
Uma ucabangela zonke lezi zici futhi uzihlanganisa nolwazi lwama-fogger omile noma amanzi kanye nezinhlobo ezahlukene zama-fogger, kufanele ukuthole kulula kakhulu ukwenza isinqumo esifanele sokuthi yiluphi uhlobo lwe-fogger olulungele wena.